Duqa Muqdisho oo ka hadlay banaanbaxa ka socda Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Duqa Muqdisho oo ka hadlay banaanbaxa ka socda Muqdisho
Duqa Magaalada Muqdisho ayaa goordhow ka hadlay banaanbaxyo rabshada wata oo ka socda Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya.
Banaanbaxyadan ayaa yimid kadib markii Askar ka mid ah Ciidanka Booliska uu toogasho ku dilay mid ka mid ahaa wadayeesha Bajaaja iyo Ruux u saarnaa Mootada.
Falka toogashada ayaa waxuu ka dhacay Isgooyska Howlwadaag ee Magaalada Muqdisho.
Duqa Muqdisho Eng. Yariisoow ayaa ugu baaqay dhalinyaradda Banaabaxyadda ka bilowday Muqdisho in ay Xaaladda dejiyaan, islamarkaana ay go’an tahay maamulka gobolka Banaadir wax ka qabashada dhibaatadda taagan.
Eng Yariisow ayaa Cambaareyay falkii Saaka Askari ka tirsan Ciidanka Dowlada uu ku dilay wiil Mooto Bajaajle ah iyo qof Shacab ah oo la saarnaa.
Wararkii ugu dambeeyay banaanbaxyo ka socda Muqdisho (SAWIRRO)